Gom Faní ar Sáf Faní (Good and clean water) – Rohingya Language Foundation
GOM FANÍ AR SÁF FANÍ
Faní añárar tú no tákile no faré dé éndila hodún bicí zoruri jiníc. Añárar aramiyot ollá gom faní ar sáf faní lage. Sáfsotura noó dé fanít mazé biaram or fuk ókkol táke.
Sáfsotura noó dé faní háile feçor biaram ar óloiddá biaram ókkol ó.
Foñsa fathkuwa ardé foñsa foóir ór faní ókkol no hóon saá. Hál or faní, foóir ór faní, fathkuwar faní ókkol óre yó híñzai yóre hoón saá.
Fathkuwa arde foóir ókkol óre sáfsotura gorí raká foribóu. Háibar faní ar féla faní ré yó sáfsotura gorí raká foribóu. Fanír mothka ar fanír góra ókkol ó sáfsotura gorí raká foribóu.
Fanír mothka ar fanír góra ókkol ót mazé mucá ar masí ókkol no boiyé fán dhákna gúri di raká foribóu. Ar faní ré zeddúr lage éddur foittó din háa foribóu.
Gom faní = ရေကောင်း
Sáf faní = ရေသန့်
Jiníc = အရာ
Aramiyot = ကျန်းမာရေး
Lage = လိုအပ်
Fuk = ပိုး
Feçor biaram = ဝမ်းရောဂါ
Foñsa fathkuwa= ရေတွင်းပျက်
Foñsa foóir = ရေကန်ပျက်
Hál = မြစ်
Híñzai yóre = ကျိုချက်၍
Góra = ရေအိုး
Mucá = ခြင်
Masí = ယင်ကောင်
Dhakná = အဖုံး
Foittódin = နေ့စဉ် နေ့တိုင်း
By: Citizen o Arakan
ရေသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သောရာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကျန်းမာရေးအတွက် ရေကောင်းရေသန့် ရဖို့လိုသည်။ မသန့်ရှင်းသောရေတွင် ရောဂါပိုးများ ပါတတ်၏။
မသန့်ရှင်းသောရေကို သောက်သုံးမိလျှင် ဝမ်းရောဂါနှင့် အသားဝါ ရောဂါ ဖြစ်တတ်၏။
ရေတွင်းပျက် ရေကန်ပျက် များမှ ရေကို မသောက်သုံးသင့်ပါ။ မြစ်ရေ၊ ကန်ရေ၊ တွင်းရေတို့ကို ကျိုချက်၍ သောက်သုံးသင့်သည်။
ရေတွင်းရေကန်များကို သန့်ရှင်းအောင်ထားရမည်။ သောက်ရေ၊ သုံးရေသည်သန့်ရှင်းရမည်။ သောက်ရေ၊ သုံးရေထည့်သော အိုးခွက် များကိုလည်း သန့်ရှင်းစွာ ထားရမည်။ ရေအိုး၊ ရေခွက်များကို ခြင်၊ ယင်မနားနိုင်အောင် ဖုံးအုပ်ထားရမည်။
ရေကို နေ့စဉ် လုံလောက်စွာ သောက်သုံးရမည်။
ဒုတိယတန်း မြန်မာဖတ်စာ စာမျက်နှာ ၁၅
Lekóya: Citizen of Arakan (Bormá, Akyab, Nazir Farar)
Father of Rohingyalish. Eng Mohammed Siddique Sáb (UK)